ManCity oo guul darro qaraar dhadhansiisay Liverpool kadib markii 4-0 ku garaacday… – Hagaag.com
Posted on 3 Luulyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Manchester City ayaa burburisay dabaaldegyada kooxda Liverpool oo hanatay Horyaalka Premier League, waxay Khamiistii dhadhansiiyeen guuldarro 4-0 wareega 32da ee Premier League.
Kevin de Bruyne ayaa goolasha u furay Manchester City daqiiqadii 25aad markii uu laaday rigoore, waxaa goolasha labaad iyo seddaxaad raacsaday saaxiibadiisa Rahim Sterling iyo Phil Foden daqiiqadihii 35aad iyo 45aad.
Ciyaarta qeybtii labaad, Manchester City ayaa ku guuleysatay goolkoodii afaraad daqiiqadii 66aad kadib markii ciyaaryahanka Liverpool Alex Oxlade Chamberlain oo bedel ku soo galay uu si lama filaan ah gool uga dhaliyay kooxdiisa kadib markii uu isku dayayay inuu difaaco darbo uu soo tuuray Sterling.
Sidii la filaayay, Ciyaartoyda kooxda Man City iyo macalin Pep Guardiola ayaa u sameeyay marin sharafeed loogu talagalay ciyaartooyda Liverpool kadib markii ay hanteen horyaalka, iyada oo la raacayo dhaqanka Horyaalka Premier League.
Mancheste City ayaa ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka waxayna leedahay 66 dhibcood, waxay 20 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka ee Liverpool.